Egburu ndị njem nlegharị anya Russia anọ, mmadụ 16 merụrụ ahụ na ihe mberede njem ụgbọ ala Turkey
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Turkey na -agbasa News » Egburu ndị njem nlegharị anya Russia anọ, mmadụ 16 merụrụ ahụ na ihe mberede njem ụgbọ ala Turkey
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Crime • News • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa Russia • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Turkey na -agbasa News
Dị ka akụkọ ndị uwe ojii Turkey si kwuo, onye ọkwọ ụgbọ ala ahụ nke nwere ndị njem nlegharị anya Russia 22 nọ n'ụgbọ ahụ kwụsịrị ụgbọ ala wee banye n'ụzọ na -abịanụ ebe ụgbọ ala tụgharịrị.
Ndị njem na -afụ ụfụ n'ihe mberede ụgbọ ala ndị njem na Antalya, Turkey.
Maka ndị mmadụ nwụrụ, mmadụ 16 merụrụ ahụ, dịka akụkọ siri kwuo.
Ndị njem nlegharị anya Russia iri abụọ na abụọ nọ na bọs ahụ dara.
Ụgbọ ala bu ndị njem si mba ọzọ kpuchiri na mpaghara Turkey nke Antalya.
Ihe mberede a mere na mpaghara Side na mgbede Mọnde, Ọgọstụ 2 n'ihe dị ka elekere isii nke mgbede, n'akụkụ obodo Manavgat. Ụgbọ ala ahụ bu ndị njem Russia si n'obodo Konakli gaa Ọdụ ụgbọ elu Antalya - Ndị ezumike kwesịrị ịlaghachi Russia na elekere 9:50 nke abalị ahụ.
Dị ka akụkọ ndị uwe ojii Turkey si kwuo, onye ọkwọ ụgbọ ala ahụ enweghịzi ike wee banye n'okporo ụzọ na -abịanụ ebe bọs ahụ tụgharịrị.
Enwere ndị njem nlegharị anya Russia iri abụọ na abụọ nọ na bọs ndị mechara ezumike ha na Antalya.
Ndị njem ụgbọ ala anọ nwụrụ n'ihe mberede a, opekata mpe iri na isii merụrụ ahụ.
Dị ka onye na -ahụ maka njem nlegharị anya Russia Intourist si kwuo, enyere enyemaka niile dị mkpa nye ndị ihe mberede ahụ metụtara. N'oge a, ndị njem niile nọ n'ụlọ ọgwụ anọ na mpaghara Antalya. A na -akọwa ozi gbasara ọnọdụ ndị ahụ metụtara. Onye na -anya bọs amaghị ihe ọ bụla nọ na nnukwu ọnọdụ.
Nke a abụghị ihe mberede mbụ emere ndị njem nlegharị anya Russia na Turkey n'ọnwa ndị na -adịbeghị anya. N'April 10 nke afọ a, otu nwanyị Russia nwụrụ n'ihe mberede ụgbọ ala na Antalya, Turkey. Ndị njem nlegharị anya Russia 26 n'ime mmadụ 32 n'ime ụgbọ ala merụrụ ahụ n'ihe mberede ahụ.